mpanoratra malagasy – Blaogin'i Voniary
Étiquette : mpanoratra malagasy
Boky nosoratan'i Xena Zen Aom (Rakotomalala Amour) miresaka fampivoaran-tena, fahaiza-miaina, fampivelaram-panahy, psikolojia ary fanabeazana sy fitaizana.
Amin’izao vanim-potoana iainantsika izao, toa saron’ny alasafay ny asa soratra kanto, toa takon’ny avy any ivelany ny diam-penin’ny mpanoratra Malagasy. Tsy milavo lefona anefa izy ireo fa mijoro hatrany ary mahatsapa fa mbola misy lanjany ny asa sorany ary mbola misy andraikiny eo amin’ny fiarahamonina. Mpanoratra samy manana ny hanitra ho azy ireo nandray anjara... Lire la Suite →
Izy no mpanoratra ny « VATO AMBANY RIANA », nahazo loka voalohany tamin’ny fifaninana tantara foronina nampanaovin’ny SYNAEL miompana amin’ny lohahevitra hoe « Sao hanambady aloha loatra ». Mpanoratra feno hatramin’ny fahatanorany, tsy nahasakana izany ny maha talen’ny fitantanam-bola azy eo amin’ny sehatry ny asa. Manasa anao ary ifampizara ny sombim-piainany. Voniary : Inona no mety zavatra niavaka tamin’ny fahazazanao... Lire la Suite →